Mpanamboatra hafanana tsy misy fotony | China Infrared Thermometer Factory & mpamatsy
Thermométer ho an'ny olon-dehibe, Thermometer tsy misy ifandraisany amin'ny alàlan'ny nomerika mialoha amin'ny famakiana Fahrenheit ho an'ny zazakely sy olon-dehibe
Ity vokatra ity dia mety amin'ny fandrefesana ny mari-pana ho an'ny olon-dehibe, ny zaza ary ny zaza vao teraka. Ampirisihina ny olon-dehibe hampandeha ny thermometer infrared.
Ny basy mari-pana amin'ny handrina (thermometer infrared) dia natao handrefesana ny hafanan'ny halavan'ny vatan'olombelona ary tena tsotra sy mora ampiasaina. Ny fandrefesana ny mari-pana marina ao anatin'ny 1 segondra, tsy misy pentina laser, sorohina ny fahasimban'ny maso, tsy mila mikasika ny hoditry ny olombelona, ​​sorohina ny areti-mifindra, ny refin'ny mari-pana iray, ary jereo ny gripa. Izy io dia mety amin'ny mpampiasa an-trano, trano fandraisam-bahiny, trano famakiam-boky, orinasa lehibe ary andrim-panjakana lehibe, ary azo ampiasaina amin'ny hopitaly, sekoly, fadin-tseranana, seranam-piaramanidina sy toerana midadasika hafa, ary azo ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa.
Ny mari-pana ara-dalàna an'ny vatan'olombelona dia eo anelanelan'ny 36 ～ 37 ℃ eo ho eo). Raha mihoatra ny 37.1 ℃ dia midika hoe tazo, 37.3_38 ℃ midika fihenan'ny tazo, ary ny 38.1-40 ℃ dia midika hoe tazo mahery. Ambony 40 ° C, tandindomin-doza ny fiainana amin'ny fotoana rehetra.